China OEM PP Cotton kwishawa intloko iCartridge lokucoca ulwelo yoMvelisi kunye Supplier | Xinpaez
OEM PP Cotton yishawa intloko iCartridge lokucoca ulwelo Core
Isihluzi esitsha seTekhnoloji-imveliso yesi-2 yesiZukulwana, i-Harder, ukulungeleka okusebenzayo ngakumbi, ukuPhumelela okuphezulu
Ukucocwa kweshawari -Ukufumana amandla, iRust, iDust, iNemotode, njl.
Ubomi obude-iinyanga ezi-3-6
I-OEM ODM-Isikhundla esineMveliso ePhakamileyo, iimveliso ezenziwe ngentando.
Iimbonakalo: Ukuhluza ukuhlamba
Ubuncinane be-order order: 1000
Nokuba uyakwamkela ulwenziwo: I-OEM, i-ODM yamkelekile
Ubukhulu: 70/106/124/118 MM
PP yomqhaphu Shower lokucoca ulwelo Core
Umgangatho wezinto eziphathekayo: i-polyester fiber (izinto ze-PP)
Ixesha lokutshintsha: iinyanga ezi-3 ukuya kwezi-6, kuxhomekeke kumgangatho wamanzi, ngesiqhelo i-10000L.
Umsebenzi: Hluza ukungcola kwe-colloidal, udaka, umhlwa, amaqanda ezinambuzane, izinto ezingcolisayo zendalo, njl
Ireyithi yokucoca: 5 Micron
Umgaqo wokucoca ulwelo
Isixhobo sokucoca i-PP somqhaphu senziwe nge-resin ye-polypropylene njengemveliso eluhlaza yokwenza imicu, edityaniswe yifayibha ngokwayo. Ubume becebo lokucoca ulwakhiwo olunemicu engqingqwa engaphandle eshinyeneyo, imicu ecekeceke yangaphakathi, umaleko ongaphandle ovulekileyo, kunye nomaleko wangaphakathi oqinileyo. Ukucoca ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi, ukusondela kubume bengaphakathi lento yecebo lokucoca, ubungakanani besayizi wepore, ukuphakama kokuchaneka kokuhluza.
Olu cwecwe lunqabileyo luyingqayizivele lwenza intsalela yamacala amathathu okucoca ulwelo, olunokuba nobubanzi obuninzi kunye nolwakhiwo olunzulu, ngomthamo omkhulu wokubamba ubumdaka; I-PP inyibilike into yokucoca ulwelo yomelele, xa itheko lokucoca ulwelo kunye noxinzelelo lwendawo yokuphuma ingu-0.4Mpa, inqanaba lokuhamba kokuhluza likhulu, kwaye umahluko woxinzelelo mncinci, Isiseko secebo lokucoca asikhubazekanga; Idibanisa umphezulu, ubunzulu, erhabaxa kunye nokucoca okuhle; Inempawu zokuhamba okukhulu, ukumelana nokubola, uxinzelelo oluphezulu. Isetyenziselwa ukuvimba amasuntswana amakhulu anjengomhlwa, isanti kunye namaqanda ezinambuzane emanzini.
Ukuthetha ngokutshintsha, Ngenxa yokuba isihluzi se-PP yomqhaphu yeyinto yokuqala yokuhluza xa uhlamba, ngaphezulu kwe-80% yobumdaka iyakucocwa kweli nqanaba, kwaye ukungcola okungakumbi kuhluziwe, kulula ukuba isihluzo ibhlokiwe. Ke ngoko, ubomi bento yecrafti ye-PP bufutshane kakhulu. Isixhobo sokucoca ulwelo sinokufuna ukubuyiselwa ngaphezulu kweenyanga ezimbini kwiindawo ezinomgangatho ophantsi wamanzi, kwaye eyona ndawo inde enomgangatho wamanzi angcono ayizodlula iinyanga ezintandathu. Ke ukuba uthenga intloko yeshawari ngesixhobo secebo lokucoca ulwelo lwe-PP, ukuthintela ungcoliseko lwesibini, kuyacetyiswa ukuba ubeke endaweni yengcambu yeefilitha rhoqo emva kweenyanga ezi-3-6 okanye njalo.
Ungawugweba njani umgangatho we-PP yecandelo lokucoca ulwelo
1. Nceda ujonge ubunzima. Singabulinganisa ubunzima ngezandla zethu. Ubunzima bunobunzima, kokukhona uxinano lwefibre yento yokuhluza. Umgangatho ungcono.
2. Nceda utshekishe izinto zokufunda. Xa ukhetha isihluzo, kufuneka ube nethemba malunga nezinto zecebo lokucoca ulwelo. Umbala wesiseko secebo lokucoca ulingana kwaye umphezulu ucabalele. Icebo lokucoca ulwelo elisezantsi alilingani ngombala kwaye lihlwempuzekile kubume.
3. Ukunyanzelwa. Ngokubanzi, ukuphakama koxinano lwefayibha. Kungcono ukusebenza koxinzelelo, ngcono umgangatho we-PP yomqhaphu wokucoca ulwelo. Sinokugweba ngokuziva kwesandla, ukomelela kokuziva kwesandla, ngcono ukusebenza koxinzelelo.
Ngokubanzi sibonelela ngobungakanani obune, iinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM ezikhoyo. Nokuba ungakanani na ubungakanani obufunayo,
singayenza ibe ngokwezifiso. Okwangoku sinemigca yokuvelisa eyi-10 esebenza kwi-PP Core enemveliso yenyanga yezigidi ezi-2.
Egqithileyo I-cartridge yokucoca i-cartridge ye-OEM ye-Vitamin C
Okulandelayo: Itekhnoloji entsha yoxinzelelo oluphezulu lokucoca ngesandla
Itheyibhile entsha yodongwe yezimbiwa ishawa ngesandla ...